Top 10 Features Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Mac OS X El Capitan
Apple Mac OS X El Capitan waxaa soo socda
OS X El Capitan waa ugu dambeeyay Mac OS dhisay design u qurux badan oo dhulka jabiyay in X OS ka Yosemite la soo bandhigay leh. Iyada oo ay horumarinta iyo waayo-aragnimo la safeeyey in siyaabo badan oo yar, OS X El Capitan ku xidhan tahay in ay u kala duwan yihiin, qaadashada guud ee waayo-aragnimo Mac sarreysa cusub. Apple ay qorshaynayso inay u sameeyaan doorasho dadweynaha beta ee X OS ka 10.11 dadweynaha ee July uusan bilaabin ka hor dayrta soo socda in.
10ka muuqaalada OS X El Capitan
Hadda, bal aynu ka wada hadli ugu sareeya 10 muuqaalada in uu horay u raadiyaan ee Mac OS cusub ka Apple.
Splitview: Iyadoo Splitview waxaad dooran kartaa laba barnaamijyadooda si ay u buuxiyaan shaashada si toos ah, kuu ma aha oo kaliya in uu ordo barnaamijyadooda badan waqti isku mid ah, laakiin sidoo kale si fudud ay diiradda saaraan wax ka badan hal app.
Control Mission, ayaa Mac OS cusub waa kacdoonka ah in ay xaq u gaar ah; ka feature Control Mission waa caddayn ah in. Maxaa sameeyaa waa in la kaliya hal weerar dadban ku hal, haatan waxaad heli kartaa dhammaan daaqadaha furan ee aad desktop isu diyaarin ee lakabka hal la midkoodna qarsoon / duceysanayaan. Waxaa xitaa kuu ogolaanaysaa inaad soo jiidayo suuqa kala kasta si sare ee shaashadda oo ku rid meel cusub desktop, sidaas kuu si fudud u maareeyaan daaqadaha furan.
Kursor Callout: Hadda, marnaba ma waayi doontaa dulqabo ay dhacdo desktop ku taala. Si aad u ogaato meesha aad dulqabo yahay, si fudud iyo dib (trackpad) dhaqaaqo fartaada / gilgil aad mouse si dulqabo ay waynaato iyo waxa uu noqonayaa mid fudud in aad u arko.
Barta bartamaha: The feature Barta bartamaha horay u faa'iido badan u noqonaya xariifnimo leh El Capitan. Waxaa hadda ka samatabbixin kara nooc kasta oo natiijooyinka; isboortiga, cimilada, kaydka, video macluumaadka internetka iyo gaadiidka. Waxaa xitaa fahmi karo codsiyada raadinta ee afka dabiiciga ah taas oo macnaheedu yahay in aad hadda aad su'aal ku qor kartaa sida aad odhan lahaa.
Xitaa Waxaad weydiin kartaa erayo uu garanayo wax, tusaale ahaan, haddii aad ku qor 'Dukumentiyada waxaan ka shaqeeyay toddobaadkii la soo dhaafay ", Spotlight ka heli doontaa dhammaan faylasha u dhigma shuruudan.
Hagaagaya Mail: The Mail cusub kuu ogolaanaysaa inaad helitaanka iyo xukunka emails aad la baaqyada dadban iyo yimaado iyada oo taageero ah shaashad buuxda, samaynta waraaqaha dhakhso badan. Waxaa xitaa maamuli kartaa xiriirada iyo jadwalka, iyaga hayo ilaa taariikhda, ka gudahood aad mailkooda.
Notes xoogbadane: Hadda, waxaad ka badan ururinta kaliya fikirkaaga la Notes cusub oo awood leh in la Timaadda ugu dambeeyay Mac OS samayn karaa. Xataa waxaad badbaadin karo content ka barnaamijyadooda kale, la abuuro liis hubineed ee la kaliya click ah, ku dar video ah, sawir, URL ama goobta map in qoraalkaaga.
App Photos wanaajiyey: Hadda waxaad siin kartaa sawiro aad la xiriiri badan oo shaqsi ah la gaaray qalabka tafatirka xisbiga 3aad. Sidoo kale, waxaa la ganaax soco si aad u sahlan yahay ka hor inta maaraynta maktabadda sawir aad.
Safari: browser aad jeceshahay Mac waa dib usoo in edition ah Mac OS, kuu haatan in ay sii dhan websites aad jeceshahay la heli karo oo u furan iyada oo fursad u ah iskula Goobaha. Xitaa in aad sii qulquli karaan video ah oo ka yimid bogga internetka adiga oo isticmaalaya AirPlay in aad HD TV.
Maps: Hadda, xitaa macluumaadka transit ku Maps, taas oo inta badan ka sahlan si aad u safraan meel kale oo aad ka heli karto. Waxa aad bixisaa wax walba oo aad u baahan doonta in ku dhow; Macluumaad ku saabsan gaadiidka dadweynaha khariidado, jadwalka iyo tilmaamaha.
Hagaajinta Language Support - Shiinaha iyo Japan: Mac hadda sii si fiican ugu la noocyada cusub ee nidaamka iyo hababka talooyin fiican ku daray for Chinese iyo Japan oo keenta in ay si fudud & qurux akhriska iyo qoraalka ee luqadaha la isticmaalayo Mac.
OS X El Capitan 10.11 vs. OS X Yosemite 10,10
OS X El Capitan waxay keentaa Koox ka mid ah qaababka cusub in ay ka horreeyay, fudud OS X Yosemite ka maqan. Liiska waxyaabahan waa sida hoos ku siiyo.
• Control Mission
• Kursor Callout
• Hagaajinta Spotlight
• Mail la qaababka cusub
• Wax badan ka xoog Notes app
• Photos xoojiyay
• dhirta web Sare cusub Safari
• Maps macluumaad transit
• taageero la wanaajiyey ee afafka - Japanese iyo Shiinaha
Macs in la jaanqaadaan OS X El Capitan - Halkan waa liiska Macs in la jaanqaadaan ugu dhaqsiyaha badan in la bilaabay OS X El Capitan.
• iMac (Mid-2007 ama cusub)
• MacBook (13-inch Aluminium, Marxuum 2008) iyo (13-inch, Early 2009 ama cusub)
• Pro MacBook (13-inch, Mid-2009 ama cusub), (15-inch, Mid / 2007 dambe ama cusub) & (17-inch, 2007 dambe ama cusub)
• MacBook Air (dabayaaqadii 2008 ama cusub)
• Mac Mini (Early 2009 ama cusub)
• Mac Pro (Early 2008 ama cusub)
Time for a poll deg deg ah
Aad u cusboonaynta doonaysaa in aad Mac OS X El Capitan; dooro jawaabta aad ka fursadaha hoos ku siiyo.
Sida loo tirto faylasha ka weyn X maalmood on Windows ama Mac
Mac uma shaqeeyo on Samsung AllShare?
Sida loo Setup Android ADB on Mac Effortlessly
Paragon NTFS u Mac
-jeega Native: Pro Traktor u Mac
Clipgrab u Mac: Online Video Download la One Click (Yosemite mid)
> Resource > Mac > Top 10 Features Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Mac OS X El Capitan